घरमा राख्नुहोस् यस्ता चीज, आर्थिक संकट हटेर जानेछ !::Leading Nepal News
घरमा राख्नुहोस् यस्ता चीज, आर्थिक संकट हटेर जानेछ !
एजेन्सी । वास्तुशास्त्रमा अनुसार घरमा वास्तु नमिल्दा त्यसको नकारात्मक प्रभाव त्यस घरमा बस्ने मानिसहरुमा प्रत्यक्ष पर्न जान्छ । बास्तु शास्त्रले घरमा हरेक कुराको लागि उचित स्थान र दिशा हुनुपर्ने कुरा उल्लेख गरेको छ । यसले आर्थिक तथा पारिवारिक संकट र चिन्तालाई कम गर्न सहयोग गर्छ । बास्तु शास्त्रका अनुसार केही यस्ता चीजहरु छन् जसलाई घरको सही स्थानमा राख्दा सुख र समृद्धि आउँछ र आर्थिक संकट हटेर जान्छ…
लाफिङ बुद्धः आर्थिक सफलता प्राप्त गर्नको लागि हरेक व्यक्तिको घरमा लाफिङ बुद्ध राख्न जरुरी हुन्छ । लिभिङ रुमको मुख्य ढोकाबाट छड्के तिर लाफिङ बुद्ध राख्नुपर्छ । बुद्धलाई समृद्धिका देवता मानिन्छ । बुद्धको मुस्कानले समृद्धि आउँने विश्वास गरिन्छ ।
गोल्ड फिसः घरमा गोल्ड फिस अर्थात सुनौला माछा राख्दा सौभाग्य बढ्ने मान्यता रहेको छ । यसले धन, मान, सम्मानमा वृद्धि गर्ने विश्वास गरिन्छ । तर, यसलाई बेडरुम, भान्साकोठा र बाथरुममा कहिल्यै पनि राख्नुहुँदैन ।
कछुवाः कछुवालाई शुभ जीव मानिन्छ । यसलाई घरमा राख्दा सफलता र धन–दौलत र खुशीयाली बढाउने सुचकको रुपमा लिइन्छ । यसलाई अफिसमा वा घरको उत्तर दिशामा राख्नुपर्छ ।
सिक्काः घरको ढोकामा रातो रिबनमा तीनवटा सिक्का बाँधेर राख्दा घरमा धन र समृद्धि आउँने बताइन्छ । यसको लागि रातो रिबनमा जम्मा तीनवता सिक्का बाँधेर ढोकाको भित्रपट्टि राख्नुपर्छ । बाहिर राख्दा लक्ष्मी बाहिर हुने मान्यता छ ।